काठमाडौँ। नेपाली युट्युबर सोनीका रोकायाले चर्चित भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको अन्तर्वार्ता लिएकी छिन् । केही दिन पहिले फेसबुक मार्फत उनले ‘द सोनीका सो’को लागि कपिल शर्मा सँग अन्तरवार्ता लिएको जानकारी दिएकी थिइन् । सोनीकाले कपिल सँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै कपिललाई निम्ता दिएकोमा धन्यवाद समेत दिएकी थिइन् । नेपालमा ‘वाउ नेपाल’ युट्युब च्यानलमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्चामा आएकी उनले ‘द कपिल शर्मा सो’का होस्ट कपिललाई भेटेकी हुन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत च्यानल ‘द सोनीका सो’का लागि चर्चित कमेडियन कपिलसँग अन्तरवार्ता लिएको बताएकी छिन्।सोनीकाले कपिल सँगको अन्तर्वार्ता आइतबार आफ्नै युट्युब मार्फत…
एजेन्सी । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल देखी युट्युब सम्म भाइरल भइन् एक भारतीय महिला । रेल्वे स्टेसनमा गीत गाएर गुजारा चलाउने रानूमण्डल एक भिडियोका कारण अहिले यो स्थानमा रहेकी छिन् । उनको पुरै जिन्दगी कायापलट भएको छ । रानुको जीवनमा आएको यस्तो परिवर्तनलाई भाग्यको खेल नै मान्नु पर्छ । रानु मण्डलले आफ्नो एक गीतले हरेक सबैलाई दिवाना बनाएको थियो । बेघर महिला बाट एकाएक सेलीब्रेटी बनेकी रानु अव छिट्टै आफ्नो फ्यान्सहरुको लागी एक मेलोडियन गीत कह रही है नजदीकिया लिएर आउदै छिन् । यस गीतमा बलिउडका चर्चित गाएक उदित नारायण…
पहिलो पटक डेटिंग जादै हुनुन्छ भने यी ५ कामहरु गर्दै नगर्नुस : आफुलाई मन परेको मान्छे लाइ पाउनको लागि आजकाल प्रेमी प्रेमिकाहरु ले नगरेको केहि हुदैन ! मन परेको मानिसलाई पाउन को लागि जे गर्न पनि राजि हुन्छन ! एक अर्काप्रति कसरि आकर्षित हुने भन्ने बारेमा सकेसम्मको मरिहत्ते गर्छन ! तर यसरी गरेको मेहेनत कहिले काही खेरा जाने गर्दछ ! आकर्षित गर्ने मामिलामा पुरुष भन्दा महिलाहरु अगाडी छन् मन परेको पुरुष लाइ पाउन को लागि अनेकौ जुक्ति लगाउछन ! तर आकर्षित गर्ने नाममा अपनाइएका उपायहरु कहिलेकाहिं फेल खान्छ र ति…
असोज १२, २०७६ काठमाडौं । आफूलाइ भ’ष्ट्राचार वि’रोधी अभियान्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाहिले आफूलाइ मा’र्ने अभिप्रयाले हिजो ढु’ङ्गामुडा सहित आ’क्रमण भएको बताएका छन् । विना हा’तहति’यार घुम्न, डुल्न र बोल्न नपाउने कस्तो लोकतन्त्र भनी उनले प्रश्न गरे । आक्र’मणपछि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उप’चार गराइरहेका शाहीलाई भेट्न गएका विश्लेषक एवं अभियान्ता दिलनिशानी मगर र पुण्य गौतम लगायतको टोलीसँग उनले आफूलाई सिद्या’उने निय’तले आ’क्रमण भएको बताएका हुन् । ‘म बोल्नको लागि चितवन गएको थिएँ, माइक्रो बसमै आ’क्रमण भयो, सीटमुनि बसेर बाँचें’ शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै दिलनिशानीले लोकान्तरसँग भने, ‘विना हातहतियार हिँडडुल गर्न नपाउने…
एजेन्सी : आवाज’भन्दा द्रूत गतिको ‘अन्त’रिक्ष विमा’न’को प्रतिक्षाः चार घण्टामै लण्डनदेखि सिड्नी : लण्डनमा विकास भइरहेको आवाज’भन्दा द्रूत गतिको ‘रकेट इ’न्जिन’ले उडान भर्न थाले’पछि सन् २०३० को दशक’मा लण्डन’देखि सिड्नीको हवाई यात्रा ८० प्रतिशतले कम हुनेछ । युके अन्तरिक्ष सम्मेलन २०१९ मा युकेको अन्तरिक्ष संस्थाले ‘विश्वकै पहिलो अन्तरिक्ष पुल’ (वल्र्ड–फस्ट स्पेस ब्रिज) सम्झौतामा अस्ट्रेलियन अन्तरिक्ष संस्थासँग अझै नजिक रहेर काम गरिरहेको घोषणा गरेको छ । द सिनर्जेटिक एयर–ब्रेथिङ रकेट इन्जिन (एसएबिआरई)ले अक्सफोर्डशीर–बेस्ड रियाक्सन इन्जिनबाट यो नयाँ व्यवसायमा सजाउन लागेको हो । ‘हामीले एसएबिआरई रकेट इन्जिन कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं, त्यसले सम्भवत चारघण्टाभन्दा…
काठमाडौँ । हिन्दु नेपालीको चार्ड वार्ड लाई लक्षित गर्दै आउने प्रत्येक चाडपर्व फरक-फरक गीतहरू छन् । महिलाहरूको महान् चार्ड हरितालिका जित सकिएपछि भित्रिने बडादसैँको मालश्री धुनले बेग्लै उत्साह थप्छ । रेडियो तथा टेलिभिजनमा घन्किने मालश्री धुनले नै दशैको रौनक भित्राउँछ । शुक्रवार प्रकाशित हुने साप्ताहिकका अनुसार मालश्री धुनलाइ करिब ४ सय वर्ष पुरानो धुन मानिन्छ । दसैँलाई लक्षित गरी तयार भएका गीतले विश्वभर छरिएका हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरुको भावनालाई स्पर्श गर्छ। दसैँका गीतमा नेपालीहरुको सुख, दुःख लुकेको पाइन्छ। लरी।।।लरी।।।लरीलै बाट सुरु भएको चलचित्र ‘मुग्लान’ मा समावेश ‘दसैँ आयो’ गीतले घर आँगनमै…
सिड्नी । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले दिए दशैंको शुभकामना ( हेर्नुहोस सुभकामना सहित ) अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले हिन्दूहरुको महान चाड बडादशैंको शुभकाम’ना दिएका छन् । आइतबार घटस्थापना’को दिन शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्र’धानमन्त्री मो’रिसनले सबै हिन्दुहरु’लाई दशैंको न’वरात्रमा हर्षोल्लास र शक्ति अझ बढोस् भन्ने का’मना गरेका छन् । दशैंको नवरात्रिले सबैलाई एकसूत्रमा बाँधिराखेको अष्ट्रेलियाको बहुसँस्कृतिको याद आउने उनले उल्लेख गरेका छन् । साथै आस्था र पृष्ठभूमि जे भए पनि एकअर्कालाई स्वीकार र सम्मान गर्दै विशेषाधिकार तथा जिम्मेवारी हामी सबैलाई मिलोस् भनेर अष्ट्रेलियाले प्रतिज्ञा गरेको उनले बताएका छन् ।उनले बिभिन्न देशबाट आएर…
पहिलो पटक एकसाथ मिडियामा आए जिग्री र रक्षा (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । चर्चित हास्यटेलिसिरियल ‘भद्रगोल’ बाट आफ्नो नाम र कामले दर्शकको निकै माया पाएको एक जोडी हो जिग्री रक्षा । कुमार कट्टेल (जिग्री) र रक्षा श्रेष्ठ (रक्षा) पहिलो पटक एकै साथ मिडियामा आएका छन्। ‘भद्रगोल’ बाट बाहिरिएपछि पुरानो टिमले नै अहिले ‘सक्किगोनी’ लिएर आएका छन् । पहिलो भाग दर्शकले ठिक ठिकै मानेपनी दोस्रो भाग निकै मन पराइएको छ । ‘सक्किगोनीमा’ पनि मुख्य पात्रमा रहेका जिग्री रक्षाको सुरुवाती भाग देखी नै प्रेमी प्रेमिकाको भूमिकामा देख्न सकिन्छ । चर्चित टेलिभिजन शो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अतिथि बनेर पुगेका जिग्री रक्षा सिरियल भन्दा बाहिर…
सिड्नी । आज बाट हिन्दु नेपालीहरूको महान् चार्ड बडादसैँ सुरु भएको छ । आज दशैको पहिलो दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् घटस्थापना । आज बिहान १०:३५ बजेको विशेष साइतमा काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दसैँ घरमा जमरा राखिएको छ। पहिलो दिन घटस्थापनाका दिन नेपालीहरूले घरघरमा जमरा राखेपछि दसैँ सुरु भएको मानिन्छ। घटस्थापना र विजयादशमीको साइत देश अनुसार नै फरक रहेको छ । घटस्थापनाका दिन घरघरमा घट कलशको स्थापना गरी देवी देवताको आह्वान गरिन्छ ।अष्ट्रेलियामा पनि दशैँको रौनक विशेष रहन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पनि यस चाडलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गर्छन्…
१२ असोज २०७६, आइतबार, काठमाडौँ । हिन्दु नेपालीहरूको महान् चार्ड बडा दशैको पहिलो दिन आज घटस्थापना । यस दिन घर तथा मन्दिरहरूमा जमरा राख्नुको साथै कलश स्थापना गरिन्छ । आज बाट नवरात्री सुरु हुन्छ । बिहानै शरीर शुद्ध गरी नदी, खोलाको किनार बाट चोखो बालुवा वा पञ्च माटो ल्याइ घरको पूजाकोठामा वेदी बनाएर त्यसमा जौ को जमरा उमारिन्छ । यो पक्षको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्री, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा…